Smart Electronics MCPCB ye LED chubhu mwenje MCPCB yemagetsi emagetsi
Shenzhen MCPCB Fekitori Alum ...
Shenzhen aruminiyamu pcb facto ...
3D peta anokwanisa MCPCB 1.6MM 1O ...
Akatungamirira Tube Light Strip pcb Bo ...
Yakanakisa mhando yepamusoro simba alu ...
chinogadziriswa ipad kumira, mapiritsi anomira piritsi
1.Ndeupi mhando yePCBS iwe yaunonyatsoziva?
Tiri nyanzvi kugadzira Singe-divi pcb, Double-divi pcb, Multilayer pcb, Aluminum pcb, mwaya Tin pcb, kunyudzwa Gold pcb, etc.
2.What ndiyo yako Lead nguva?
Lead nguva inowanzo chengeta pano, kazhinji 3-5days yePCB sampuli, mazuva 7-15 ekugadzirwa kwakawanda. Kune mamwe mamiriro akakosha, isu tinogona zvakare kuraira mutengi pamberi kuti tidzivise chero mune-kutarisira kana kurasikirwa parutivi rwevatengi.
3. Ndeipi yako bvunzo yekuyedza uye kuti unodzora sei hunhu?
Semuyenzaniso, kazhinji kunoedzwa nekubhururuka probe; for Pcb Vhoriyamu pamusoro pe3 mativi emamirimita, kazhinji kuyedzwa nemagetsi, izvi zvinowedzera kukurumidza. Nekuda kwekuti pane matanho mazhinji kugadzirwa kwePCB, isu tinowanzo ita ongororo mushure mematanho ese.
4. Chii chako pasuru?
With Inner Vacuum pasuru uye kunze atorwa.
Izvi zvinoenderana nemutengi, dzimwe nguva tinotumira kuburikidza neambotungamira, anova zvakare mumiriri weDHL, TNT, UPS, FedEx, zvichingodaro. Wedu wekumberi anogona kupa yakanyanya kuwanda yekutakura mutengo kupfuura yatinowana zvakananga kubva kune avo vanoratidzira bhizinesi.
6.What wako zvibereko kugona?
Kugona kwedu kuri pakati nepakati pemakumi matatu emamirimita emamiriyoni pamwedzi.
7.I ndinongova nemuenzaniso wePCB, kwete pcb file, unogona kuibudisira ini?
Ehe, isu tinokwanisa kuteedzera faira zvichibva pane yako sampuro, iyi faira mazita Gerber, uye kugadzirwa kunozo kupihwa kuGerber faira.
8.Can unogona kugadzira Gerber faira?
Tinogona kugadzira Gerber faira kana mutengi achigona kutipa yakarongeka, yechirimo sampuro inogona zvakare kupihwa kana mutengi achida.
9.What mhando ipi pcb faira fomati iwe yaunogamuchira yekugadzira? Ndeipi CAM software yaunoshandisa?
Isu tinobvuma Gerber faira rekugadzira. CAM350, GENESISI, UCAM, CG-CAM, V-2000.
10.Unganditendere kuti ndiise dzinoverengeka chikamu nhamba pamwechete mupaneru rimwe?
Ehe, izvi zvinowanzoitika mukati medu fekitori, nenzira iyi inogona kubatsira vatengi kudzikisa imwe mutengo uye kune imwe nhanho, inogona kubatsira kudzikisa imwe mutengo wegungano
11.What ndeupi wako mashoma odha huwandu?
Hatina muganho pane MOQ, prototype, yepakati vhoriyamu uye hombe vhoriyamu zvese zvinogamuchirwa.
12.Iyo ROHS Inotungamira-Yemahara Tsika Yakasarudzika. Mabhodhi anoiswa mucherechedzo-usina chiratidzo?
Ehe, inogona, asi inoda mutengi kuti ataure ichi chinodikanwa mufaira.
13.Mafaira angu ekugadzira akachengeteka kana ndikaaisa kwauri ekugadzira?
Chero faira revatengi richadzivirirwa chaizvo pano mufekitori yedu uye hatizorega chero wechitatu azive. Tinogona kusaina NDA newe.
Pashure: Aluminium LED girobhuiti Chiedza pcb, OEM MCPCB Mugadziri
Zvadaro: PTR / IR Sensor Yakadhindwa Circuit Board Pcb Yekutonga LED Mwenje
Mcpcb Led Bhodhi
Yakanakisa mhando yepamusoro simba realuminium akatungamira pcb 220v, ...
Direct chafariz nzira MCPCB uye Sink-ikanyanya MCPCB, C ...
PTR / vaIri Switch Akadhindwa Circuit Board pcb Con ...
Akatungamira MCPCB Akadhindwa Circuit Mabhodhi PCBA Service f ...
Shenzhen pamusoro yepamusoro aruminiyamu pcb PCPC pamwe Ta ...
3D peta anokwanisa MCPCB 1.6MM 1OZ 0.24W / mk Auto akatungamirira ...
Runfengyuan Kuvaka C, Gongyuan Rd, Dunhu 74, Baoan, Shenzhen, China